धूलोको क्षतिपूर्ति कहिले पाइन्छ ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home बिचार धूलोको क्षतिपूर्ति कहिले पाइन्छ ?
१७ वैशाख, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद भवनको पूर्वपट्टि भीमसेनगोला मार्ग छ । यो कच्ची सडक आसपासका बासिन्दाको दैनिकी धूलोका कारण कष्टकर बनेको छ । ठूलो खरीबोटमुनि केही पसल छन्, एकाबिहानै पसलेहरु निन्याउरो अनुहारमा मास्क लगाएर पाइप या बाल्टीले बाटोमा पानी छयापिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । उनीहरुको बडील्याङ्वेजले भनिरहेको हुन्छ- हाय ! यस्तो धूलोमा कहिलेसम्म गुजारा चलाउने होला ? तैपनि उनीहरु निरीह छन् र सडकमा पानी छ्यापेरै दोकान चलाउन विवश छन् । काठमाडाैंमा पानीको छुट्टै वेदना छ, लुगा धुने पानी छैन, सडकमा के छ्याप्ने ?
धुलोमा दैनिकी चलाउनुपर्ने हालत भीमसेनगोलामार्गका बासिन्दाको मात्रै होइन, बुद्धनगरका पसलेहरुको पनि त्यस्तै छ । उता रिङरोड आसपासका बासिन्दाले आफ्नो घरको बरण्डामा लुगा सुकाउन सक्दैनन् । सुकिनसक्दै धूलोले मैलो बनाइहाल्छ । काठमाडौं उपत्यकाका बाटोहरु अगाडि बनाइएका घर धूलोले छोपिँदै छन् । कमसेकम अगाडिको सडक समयमै कालोपत्रे गरिएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । तर, विडम्बना के छ भने ६० वर्षे लोकतन्त्रको डिङ हाँक्ने शासकहरुले अहिलेसम्म देशको राजधानीलाई धुले सडकबाट मुक्त कालोपत्रेमा परिणत गर्न सकेका छैनन् । अब जेठ लाग्न थालेपछि बजेट कनिका छरिन्छ र ठेकेदार एवं्र कर्मचारकिो मिलिभगतमा सरकारी सम्पत्तिको लुट सुरु हुन्छ, तैपनि सडक जस्ताको त्यस्तै ।
ललितपुरको नख्खु आसपासका बासिन्दाले केहीसमय अघि धूलोविरुद्ध असफल संघर्ष गरे । उनीहरुले सडकमा बालुवा बोकेर हिँड्ने गाडीहरुलाई रोक लगाउने वा कमसेकम धूलो नझारी हिँड्न वा सडक सफाइमा योगदान गर्न आग्रह गरे । तर, नख्खु पुल छेउका प्रहरी र ठेकेदारहरु मिलेर स्थानीयवासीको झाँको झारेपछि यो संघर्ष सेलायो । आफ्नो घरमा लुगा सुकाउन नपाएका एक स्थायनीको अनुभव यस्तो छ- ‘वातावरण प्रदुषित बनाउनेहरु र प्रहरीको मिलेमतो हुँदोरहेछ, प्रहरीले डनको पो संरक्षण गर्दोरहेछ, हामी त धूलोमा पुरिएरै मर्ने भयौं विवश छौं ।’
धूलोको यस्तो कथा बल्खु, कलंकीदेखि नयाँ बसपार्कसम्मै सुन्न पाइन्छ । त्यहाँका कुनै पनि घर सद्दे छैनन् । मानिसहरुको ओछ्यानसम्म धूलो पस्छ, बाटोको त कुरै छाडौं । धूलोका कारण पसलेहरुले त दुःख पाइरहेका छन् नै, विद्यालय जाने आउने वालबालिका र सडकमा हिँड्ने वृद्धवृद्धाहरुको अवस्था झनै खराब छ । उनीहरुका फोक्सोको संक्रमण हुन खतरा बढाएको छ धूलोले । जुनसुकै उमेर समूहमा मानिसहरुले पनि धूलोको आतंक खेप्नुपरिरहेको छ ।
सरकारको लापरवाहीले सडक प्रदुषित छ, यसको असर व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पर्छ, उसले अस्पताल जानुपर्‍यो भने निजी क्लिनिकबाट ठगिन्छ । धुलोका कारण लुगा धेरै धुनुपर्छ, राजधानीमा भाडावाल मानिसलाई धरबेटीले पानी कम दिन्छन् र भाडा बढी लिन्छन् । घरबेटीले पानी कहाँबाट दिउन् ? खानेपानीले एकसातामा पनि पानी दिँदैन । भूमिगत पानी पनि सुक्न थालेको छ । मोफसलका पहाडमा मात्रै होइन, काठमाडौंमै पानीको स्रोत सुक्दैछ ।
यो सबै दुखको फेहरिस्थ सुन्न सरकारलाई फुर्सद छैन । प्रधानमन्त्री हावाबाट विजुली, मेट्रो रेल र फोहोरबाट भात पकाउने भाषण गरेर बसेका छन् । धन्न अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले ‘धूलोबाट हुने फाइदा’को चाहिँ कुरो गर्न भ्याएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले राजधानीको धूलो देखेकै छैनन् वा महसुसै गर्न पाएका छैनन् ।
हामीलाई नियतिले ठगेको हो कि सरकारले ?
देशको राजधानीजस्तो ठाउँका बासिन्दाले दिनहुँ कुइरीमण्डल धूलो खानुपर्ने यो भगवानले ठगेको हो कि सरकारले ? प्रष्टै छ, यसमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको असक्षमता स्पष्टै देखिन्छ । गत वर्षायाममा पुरानो बानेश्वरका बासिन्दाले हिलो बाटोमा रोपाइँ गरेर सरकार र ठेकेदारविरुद्ध आन्दोलन गरे । प्रहरीले उनीहरुमाथि लाठी चार्ज गर्‍यो । त्यसपछि बल्ल ठेकेदार तात्यो र अहिले त्यहाँको सडक पीच भएको छ । तर, जुन टोलका बासिन्दाहरु धूलोमा पानी छ्यापेर बसेका छन्, त्यो टोलमा अझै कतिवर्ष पीच नहुने हो, ठेगान छैन ।
काठमाडौंमा जहाँ आन्दोलन हुन्छ, त्यहाँ पीच हुने गरेको छ । जहाँका स्थानीयहरु कानमा तेल हालेर सुत्छन्, तिनीहरुले धूलो खानुपरेको छ, हिलोमा पोतिनुपरेको छ । गतवर्ष नै पीच हुनुपर्ने बुधनगरको बाटो अहिलेसम्म पीच भएको छैन । यहाँका वासिन्दाले वर्षमा हिलो खाए, अहिले धूलो खाँदैछन् । बुद्धनगरबाट सिंहदरबार या सडक विभागको दूरी धेरै छैन ।
ठेकेदार र सरकारी अधिकारीहरको लापरवाहीकै कारण काठमाडौंबासीले धूलो खानुपरेको माथिका दृष्टान्तले स्पष्ट पार्छ । पिच नगरिएको धुले सडकमा जति पानी हाले पनि एकैछिनमा सुकिहाल्छ र डुङडुङती धूलो उड्न थाल्छ । जवसम्म सरकारले सडकको सुधार गर्दैन, तबसम्म पानी छ्यापेर यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।
संविधानले नागरिकलाई धूलोबाट बचाउने कुरोमात्रै गरेको छैन, कुनै पनि प्रदुषकले नागरिकलाई क्षति पुर्‍याएवापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत मौलिक हकमा समेटेको छ राज्यले हेरेन भनिएका कर्णाली, मधेस, वा पहाडको कुरै छाडौं, यतिबेला राजधानीकै सडकको अवस्था दयनीय छ । ठेकेदारहरुको लापरवाहीका कारण कालोपत्रे हुन नसकेका वा भएर पनि भत्किएका सडकमा उड्ने धूलोका कारण राजधानीवासीको आयु घटिरहेको छ । धुलोले उपत्यकावासीको फोक्सोमा संक्रमण बढाउने खतरा बढेको छ । राजधानीबासीलाई यसरी धूलोमा बाँच्न बाध्या पार्ने ‘प्रदुषक’ अरु कोही नभएर सरकार नै हो ।
संविधान भन्छ- प्रदुषकबाट क्षतिपूर्ति भराऊ
नयाँ संविधानले ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ लाई मौलिक हक अन्तरगत राखेको छ । संविधानको धारा ३० मा ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ शीर्षकमा यसलाई समेटिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ-‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।’ संविधानले नागरिकलाई धूलोबाट बचाउने कुरोमात्रै गरेको छैन, कुनै पनि प्रदुषकले नागरिकलाई क्षति पुर्‍याएवापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत मौलिक हकमा समेटेको छ ।
संविधानको धारा ३० को उपधारा २ मा लेखिएको छ- वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’ प्रदुषक प्रधानमन्त्रीज्यू ! क्षतिपूर्ति कहिले पाइन्छ ?
सरकारले बेलैमा राजधानीको सडक मर्मत नगर्दा नागरिकहरुले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक गुमाइरहेका छन् । स्पष्टै छ, यसमा संविधानले भनेको प्रदुषक अरु कोही नभएर ओली सरकार आफैं हो । आफूहरु सिसावाल गाडीमा हिँड्ने र बिरामी हुँदा विदेशमा गएर एण्टी फङ्सको उपचार गर्ने प्रदुषक शासकहरुले जनताको स्वास्थ्यमाथि गरेको यो गम्भीर खेलवाड वापत क्षतिपूर्ति कहिले देलाान् र संविधानको धारा ३० कार्यान्वयनमा आउला ? के यसका लागि काठमाडौंबासीले धूलोविरुद्ध आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो ?
काठमाडौं बाहिरको कुरै नगरौं !
अघिल्लो साता तराई-मधेसको हुलाकी राजमार्ग अनुगमन गरेर फर्केका विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मोफसलका सडकको धूलो राम्रैसँग खाए । गाउँको कच्ची बाटोमा धुलोले गाडीसमेत पुरिने गरेको उनले सुनाए ।
तराईमा भारतले २५ वर्ष अघिदेखि बनाउँछु भनेर हुलाकी सडक नबनाउँदा त्यहाँका बासिन्दाले धूलोमा पुरिएर बाँच्नुपरेको अधिकारीले यसपटक राम्रैसँग देखे । मधेसी नेताहरुलाई राजनीति गर्दै फुर्सद छैन, उनीहरु मधेसको मरुभूमिकरण रोक्न र वातावरण जोगाउन चिन्तित छैनन । मधेसमा रुख रोपौं भनेर सिकाउनुको साटो भएको रुखसमेत भाँचेर लाठी जुलुस निकाल्नमै नेताहरुलाई फुर्सद छैन । मधेसमा गर्मी बढेको छ, मरुभूमिकरण बढेको छ । गरीब जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । बरु पहाडमा त जसोत्यसो शीतल हावा चल्छ ।
तराईमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि बाटोहरुको स्तरोन्नति नहुँदा बाटो छेउमा घर बनाउने र व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुको कथा यस्तै दुखदायी छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको मानवीय दोहन बढ्दै जाँदा वन विनास हुनुका साथै पानीका मुहानहरु सुक्ने र लामो समय खडेरी पर्ने लक्षणहरु देखिँदैछन् । स्टेफेन हकिन्सले त्यसै भनेका होइनन्, वातावरणीय प्रदुषणका कारण पृथ्वीबाटै मानवजाति नष्ट हुने खतरा बढेको छ । तर, यस्तो बेला ओली सरकार संविधानप्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकको सुरक्षा गर्नुको साटो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविनै प्रकृतिको दोहन गर्न पाउनु पर्ने ठेकेदारप्रेमी नीतिको पक्षमा उभिएको छ ।
राजधानीवासीकै दुरावस्था त धुलाम्मे छ भने काठमाडौंबाहिरको त कुरै नगरौं । संसदको छेवैमा भएको धूलो देख्न नसक्ने सरकारले राजधानीबाहिरका जनताको स्वास्थ्यबारे कसरी चिन्ता गरोस् ?
दृश्यहरु यस्ता देखिँदैछन् कि उपभोक्ताहरु नै आन्दोलनमा नत्रिएसम्म धूलोले कान टालिएको सरकार यस्ता कुराहरु सुन्ने पक्षमा छैन ।